Wiilasha iyo Alaabada! | Martech Zone
Wiilasha iyo Alaabada!
Talaado, Oktoobar 24, 2006 Monday, August 24, 2009 Douglas Karr
Ma hubo inta aan qaadan karo! Internet Explorer 7, FIrefox 2, iyo MacBook Pro dhammaantood hal toddobaad. Waxaan ka dambeeya quudintayda RSS dhawr boqol oo qoraal, oo aan kaga dambeeyo emaylkayga illaa 200 oo emayl… oo waxaan hayaa shaqo ka badan intii aan abid soo qabtay. Adduunyada maxaa ka socda?
Marka hore… Internet Explorer 7. Runtii aad ayaan ula dhacsanahay meelaha beddelka lagu sameeyo iyo habka shaashadda loo abaabulo. Haddii aadan horeyba u tijaabin, shaashadda buuxda waa cajiib. Iyo, dabcan, tabsigu waa fiican yahay.
Ta labaad… Firefox 2. Hadda waan soo dejiyey. Runtii waa libaax! Waan ka helay Maan tijaabin higgaadinta laakiin waxaan maqlaa taasi waa muuqaal weyn. Taasi waxay ka dhigan tahay waan tuuri karaa Qasnadda Google.
Saddexaad roll durbaan garaac fadlan… MacBook Pro. Waxaan ku helay shaqooyinka ku saabsan eeygan oo si qurux badan ayaan ugu dhacay 'qodobka qabow'. Dabcan, ka dib markaan iibsaday, waxay noqotay inaan soo iibsado boorso laptop cusub ah oo qurxoon oo qurxoon. Weli waxaan ku sugayaa kormeeraha bahalka shaqada… laakiin in ka yar toddobaad, waxaan ku dhowaaday inaan si buuxda u beddelay.
Waxaan ku shubay Isbarbardhig (WOW!) Markaa waxaan ku wadi karaa XP markaan ku qasbanaado hal shaashad (ama daaqad) iyo OSX kan kale. Taasi aniga uun baa i qarineysa. Uma maleynayo inaan noqon doono Windows Curyaan muddo dheer. Waa inaan kuu sheegaa muuqaalka iyo dareenka, OSX aad ayuu uga horumarsan yahay xagga muuqaalka, dareenka iyo waxqabadka. Anigu ma ihi qof Apple ah (weli), laakiin waxaan heli karaa inaan noqdo mid. Waxaan u maleynayaa markii ugu horeysay ee aan ka furo xuduudaha, waxaan si rasmi ah u noqon doonaa mid!
Waxyaabaha qaarkood oo aanan ka helin Mac? Xadhigga tamarta birlabku waa qabow oo dhammaantiis, laakiin dhammaadka kale ayaa nuugaya… taasi waa ol ol weyn oo cufan. Oo waxay xad-gudbeen xadhigga fidinta. Naqshad fara badan cagaha yar.
5ta Khalad ee Dhimashada leh ee Maareynta Wax soo saarka
Email 2.0 - Codsiyada Internetka ee hodanka ah, Multimedia, Dukumintiyada gundhigga ah?
Oktoobar 25, 2006 at 6:53 AM
Koowaad bisadaha iyo eeyaha wada nool oo hadda Doug ku haysta MAC?! Marnaba yaanay noqon!
Qosol badan, shalayto naqshadeeyeheenna garaafka ah (MAC boy) iyo Agaasimeheena Adeegyada Internetka (wiilka PC) waxay ogaadeen inay dhab ahaan yihiin nolol ku dayasho farshaxan. Xeerka labiska xafiiskayagu wuu isbadalay (ugu dambayntii) si AAN u XIRIIRIN xiriiro. Maalintii ugu horreysay ee sharciyada cusub, wiilka MAC wuxuu u yimid inuu shaqeeyo bilaa xirnaan, laakiin wiilka PC-ga ah wuxuu xirtay xarig sidiisaba. Waxay noqdeen ganacsiga Apple.
Haddii xusuusta ay adeegto, Doug, waxaad dareemeysaa muhiimad ka badan qolka. Marka tani waxay su’aal ka keenaysaa su’aasha ah, ma ka wanaagsan tahay inaad dareento muhiim, mise qabow?